मेडिकल माफियाको आशिर्वाद पाएकी भगबतीलाई कसले हल्लाउने ! बिरामीले खाने खानामा समेत मनपरी::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मेडिकल माफियाको आशिर्वाद पाएकी भगबतीलाई कसले हल्लाउने ! बिरामीले खाने खानामा समेत मनपरी
काठमाडौं – चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा भर्ना भएका विरामीलाई खुवाउने खानाको टेन्डरमा ब्यापक अनिमियता भएको रहस्य खुलेको छ ।
वीर अस्पतालले भर्ना भएका विरामीलाई एक बर्षभरी खाना खुवाउनको लागी ८ माघ २०७५ मा सार्वजनिक सूचना मार्फत इ टेन्टर आह्वान गरेको थियो । सूचनामा टेण्डर बिड गर्ने सप्लाई कम्पनीले कम्तिमा तीन बर्षे खाद्यान्न सप्लाई गरीसकेको अनुभव हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । वीर अस्पलातले सार्वजनिक गरेको टेण्डरमा तीन वटा फर्मन्यु सूयोग, न्यु आरके र महाकाल सप्लायर्सले मात्र टेण्डर बिड गरेका थिए ।
तीन वटा फर्म मध्य महाकाली सप्लायर्स र न्यू आरेकले मात्र वीर अस्पालतले मागेको प्रमाण पूरा गरेर टेण्डर बिड गरेका थिए । तर कुनै पनि प्रक्रिया नपु¥याई तीन बर्षको अनुभब समेत नभएको फर्म न्यू सुयोगलाई वीर अस्पताल खरिद प्रमूख भगबती थपलियाले सेटिङमा टेण्डर मिलाई दिएको स्रोतको दाबी छ ।
न्यु सुयोगको वीर अस्पतालले मागेको दूवै प्रमाण पत्र नभएको स्रोत बताउँछ । अस्पतालकी खरिद प्रमूख थपलिय ले न्यु सुयोगलाई नै टेन्डर दिने निर्णय गरी अस्पताल निर्देशक र उपकुलपतिलाई पनि च्यालेन्ज दिएको चर्चा यतिखेर अस्पलात परिसरमा छ ।
खरिद शाखाकी प्रमूख भगबती मेडिकल माफिया र वीरका भ्रष्ट समूहको आड भरोसा अस्पतालमा बिरामीले खाने खानामा समेत मनपरी गर्दै आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरेकी छन् ।
तर मेडिकल माफियाको आशिर्वाद प्राप्त भगबतीलाई कसैले हल्लाउन सकेको छैन । उनको भ्रष्टाचार दिन दिनानु बढ्दै गएको छ । अस्पतालमा दुई–दुई बर्षमा खरिद शाखा परिवर्तन हुने भए पनि उनी भने चार बर्ष देखि सोही शाखामा कार्यरत छिन् । आजको जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।